Imibono engama-50 ekhanyayo ye-Birthday Party - Ekhaya
Imibono engama-50 yephathi yokuzalwa ephefumulelwe ngokuphelele
50 Totally Inspired 50th Birthday Party Ideas
Ubufakazi bokuthi izinto ziba ngcono ngeminyaka yobudala: iwayini elimnandi, ushizi, i-401 (k) yakho, nakuwe. Manje njengoba usufaka ama-50s akho, wazi kahle ukuthi ufunani nokuthi uyithanda kanjani. Ngaphandle kokuthi uma kukhulunywa ngokuthi ungawabungaza kanjani ama-oh-big amakhulu, lokho. Kodwa ungakhathazeki — sinemibono engama-50 ekhaliphile yephathi lokuzalwa lama-50 lokukhumbula lesi senzakalo esiyingqophamlando. Bheka futhi ulungele unyaka wakho omuhle kakhulu okwamanje.
OKUSHIWO: Imibono Engamashumi amane Yokuzalwa Yephathi Ezokukwenza Uqonde Phansi Ijabule ngeBig Four-Oh
1. Phuma nge-Brunch nama-Besties akho
Khetha indawo emnandi ukuhlangana nabangane bakho abaseduze futhi uchithe ekuseni ukugubha amaqanda uBenedict nama-mimosa. Noma setha umgoqo we-bagel ekhaya-mhlawumbe ubhalise omunye umuntu ukupheka nokuhlanza.
2. Bamba i-Barbecue Yasemuva
Hlanganisa osondelene kakhulu naye futhi umthande kakhulu ntambama emnandi yokudla okumnandi, umculo omnandi nokuzijabulisa. Kwenze kube njengokujwayelekile (ama-burger nama-franks) noma ama-epic (yokosa ingulube yonke) ngendlela othanda ngayo. Kepha futhi, ukucela abangani nomndeni ukuthi basize kubalulekile.
3. Go Ukunambitha Iwayini
Ngokufanelekile, uzoshayelwa uzungeze iNapa Valley ngenkathi usampula okunikelwe okuhle kakhulu esifundeni, kodwa ungakugcina kwasendaweni futhi. Kunezivini eziningi ezinhle ezweni lonke, eziningi zazo ezinikeza okunye ukuzijabulisa njengokudla nomculo. Noma thinta ibha yewayini yendawo bese ubuza ukuthi ngabe banikela ngemicimbi yokunambitha eyimfihlo.
4. Jabulela Iphathi Letiye
Iya enkomishini yetiye ntambama ehhotela eliseduze elisezingeni eliphezulu noma ubungaze iphathi yakho. Ama-sandwich amancane, ama-scones afudumele namakhekhe amahle angalungiswa (noma athengwe) kusengaphambili futhi ahlanganiswe ngaphambi nje kokufika kwezivakashi.
5. Zama imenyu yokunambitha endaweni yokudlela kanokusho
Uma kuke kwaba nesikhathi sokuqhakaza ngesidlo sakusihlwa esinezinkanyezi ze-Michelin (noma ukudla kunoma iyiphi indawo ye-chichi), kusuku lwakho lokuzalwa lwama-50.
6. Qasha Umpheki Wakho Ukupheka Ekhaya
Ufuna okuthile okhiye ophansi kancane (kepha usanambitheka ngokuphelele)? Thola umpheki ozokulungisela ukudla okwakha amanzi ekhaya nge-soirée esondelene nengakhululekile.
UJohannes Kaut / EyeEm / Getty Izithombe
7. Bheka iBrewery
Amathuba amahle wokuthi indawo edayisa utshwala yendawo eseduze nawe inikeze izinkambo-futhi ikunikeze nokudla okumnandi. Shayela phambili ukubhuka indawo yakho bese ubuza ngezinye izinzuzo (isb., Eziningi zilungele izinja nezingane futhi ezinye zinomculo obukhoma).
8. PHELA A '50S-THEMED PARTY
Ngena konke ukuvula i-50 nge-bash ephefumulelwe eyishumi. Cabanga ukudla okudliwayo (njengama-burger nezimpande zebhiya entantayo), i-sock-hop decor ne-Elvis Presley noma i-doo-wop kusidlali sokurekhoda. Lethani iziketi ezi-poodle nezicathulo zesihlalo, nonke nina T-Birds kanye ne-Pink Ladies.
9. Hambani niyobona ikhonsathi
Ukubona umculi wakho oyintandokazi bukhoma kungumuzwa omuhle oqinisekisiwe. Kodwa noma ngabe iBoss ingekho edolobheni, kungaba mnandi ukuhlola indawo eseduze yomculo ngaphandle kokukhathazeka ngohlu. Ngeke wazi, ungavele uthole intandokazi entsha.
10. Thatha Isigaba Sokupheka
Wake wafuna ukufunda ukuthi ungayenza kanjani i-sushi? Noma wamangala ngalawo ma-macaron ajabulisayo asefasiteleni lokubhaka? Noma mhlawumbe njalo uma ubaza inkukhu eyosiwe uyaziqalekisa ngokungazi indlela efanele. Usesho olusheshayo lwe-Google luzoveza amakilasi aseduzane ukuze wena neqembu labangani nibe khona.
11. Hlela Imfihlakalo Yokubulala
Kungani uye edilini lakudala elijwayelekile lapho ungajabulela kusihlwa sokubulala kanye ne-mayhem esikhundleni salokho? Noma ngabe ubamba eyakho (ungathola ikhithi eliyimfihlakalo lokubulala lapha ) noma ukubhuka iphathi yobungcweti, lokhu kusihlwa kwe-whodunnit kuzoba yinto engalibaleki yosuku lokuzalwa.
12. Yenze Ithayi Elimnyama
Thatha izinto uphakamise isitoko bese ubungaza ngesitayela ngokucela izivakashi ukuthi zinikeze izembatho zazo eziyinkimbinkimbi kakhulu. Noma ngabe uqasha indawo yangasese noma uguqula igumbi lakho lokuphumula libe yigumbi lokudlala ibhola, ukugqoka okuhlelekile kwakusihlwa kuyadingeka.
vgajic / Getty Izithombe
13. Jabulela uSpa Spa
Kwenze umcimbi wokuzijabulisa ngokuqoqa iqembu labangane bese uya e-Korean day spa (imvamisa ifaka amazinga amaningi namakamelo okuphumula) noma vele ujabulele injabulo yenkampani yakho esalon yendawo. Kunoma ikuphi, amahora ambalwa wokutotosa asemenyu.
14. Hamba ngempelasonto ...
Phuma edolobheni uthathe ikhefu elincane ukuze uhlole amasayithi amasha, ujabulele ukudla kwasendaweni futhi uzizwe ugqozi ngokuba sendaweni entsha — ngokomzimba nangokomfanekiso — noma ngabe endaweni ethile efudumele futhi exotic noma a idolobha elipholile awukayi.
15. ... Noma Ngisho Isikhathi Eside
Lolo hambo lwaseYurophu noma i-Caribbean cruise ibiza igama lakho. Ulusho kanjani usuku oluhle lokuzalwa ngesi-Italian?
16. Bheka uhlelo lwamahlaya
Bamba abangani bakho bese uhleka ungene onyakeni omusha. (Ithiphu yePro: Ungahlali nje emgqeni wangaphambili.)
17. Phonsa iFondue Party
I-retro encane, emnandi kakhulu. Nazi izindlela ezinhlanu zeshizi zokuqalisa. (Futhi ungakhathazeki - abangane bakho be-vegan bangajoyina ubumnandi nabo.)
18. Bhuka i-Stay in a Castle
Phathwa njengobukhosi esigodlweni sakho. Lawa mahhotela aseYurophu yisivumelwano sangempela, kepha uma ufuna ukuhlala e-U.S., phuma lokhu kukhethwa okuphefumulelwe inqaba eTarrytow n, uN lelo York .
Sofie Delauw / Getty Izithombe
19. Thatha Isigaba Sobuciko
Noma ngabe unguPicasso osafufusa noma amathalenta akho afinyelele ebangeni lesithathu, ukuxhumana nohlangothi lwakho lobuciko kumnandi futhi kuziphumuza ngasikhathi sinye. Singabalandeli ikakhulukazi bemicimbi ye-sip-and-paint evumela ukuthi usampule i-chardonnay njengoba ufaka umbala.
20. Yiba Nobusuku Bomdlalo
Akunasidingo sokufunda imithetho yebhuloho ngobusuku obubodwa. Esikhundleni salokho, khipha imidlalo yebhodi (siyakhetha Catan noma yisidala esihle Ukuphishekela Okuncane ) bese udlala ubusuku bonke.
21. Thatha uhambo lokudla
Ukubiza wonke ama-foodies: Bheka okunye ukudla okuyisipesheli kwedolobha lakho ngokuya kokudla kokunambitha nokuhambela amasiko. Iningi lamadolobha amakhulu liyabanikeza, futhi imvamisa ihlelwe ngamakhelwane noma ngokudla.
22. Chitha usuku emijahweni
Ama-mint juleps nezigqoko ezesabekayo ziyadingeka.
23. Iya kwiYoga Retreat
Kungakhathaliseki ukuthi ungumuntu omusha noma i-novice, umzimba wakho uzokubonga ngokwelula imisipha yakho nge-yoga ethile endaweni enhle.
Ngabe usuku lwakho lokuzalwa luhambisana nenkathi yebhola? Kubalandeli be-mega, i-tailgate ingaba yindlela ejabulisayo yokugubha-ikakhulukazi ngezindlela zokupheka eziphakeme njengezikwele zesipinashi se-artichoke noma inkukhu enamakhaza e-popcorn enongwe.
kali9 / Getty Izithombe
25. Qalisa (noma Hamba) umjaho
Asikhulumi ngemarathon lapha (ngaphandle kokuthi ufuna, kunjalo). Noma ukugijima kumnandi kuzoba, i-erm, kube mnandi. Ucezu (noma amabili) wekhekhe nakanjani luzofanelwa.
26. Funda Ukuthi Ungayishaya Kanjani I-Cocktail Oyithandayo
Thatha ikilasi lokuxuba bese uhlaba umxhwele abangani nomndeni ngamakhono akho amasha we-bartending. IManhattan eyodwa, eza phezulu.
27. Phonsa iCasino Party
Letha iVegas kuwe ngokuqasha umthengisi wamakhadi, ukufiphaza amalambu nokubheja ngemali (sikhuluma ngamasenti noma amakota). Ungathenga ngisho ne- wazizwa e-poker itafula phezulu ukwengeza ku-ambience. Kulabo abangafuni ukufunda ukudlala i-poker, gcina izinto zilula ngomdlalo we-blackjack.
28. Setha iSeyili
Ubumatasa kule minyaka embalwa edlule — thatha isikhathi uphumule. Futhi iyiphi indawo engcono yokwenza kahle leyo ngaphandle kokungena esikebheni esizungezwe abangane nomndeni? Noma ngabe uya ekuseni, kusihlwa noma impelasonto yonke, uzobe usukulungele ukuqala unyaka ngohlaka lokuthula kwengqondo.
29. Shaya Idolobha Ubusuku Bomculo Nokudansa
30. Zipholele Olwandle
Chitha usuku ufaka ilanga bese wenza umgodi womlilo kusihlwa.
UDaniel Milchev / Getty Izithombe
31. Yiya eHike
Yenza impelasonto yayo uhambe phezulu esiqongweni sentaba noma nje ukujabulela ukungcebeleka emvelweni. Kunoma ikuphi, nakanjani uzofanela ucezu lekhekhe lokuzalwa lapho usuqedile.
32. Gibela Ibhaluni Lomoya Elishisayo
I-champagne toast ezinyaweni ezingama-3,000? Manje yingakho ugubha ukuhlanganisa iminyaka engama-50.
33. Umsuka Weqembu Lasekhaya Emcimbini Wezemidlalo
Asisho ukuthi abangane bakho unayo ukukhokhela umyalezo okhethekile ozovela ebhodini lamaphuzu, kodwa ubathumele lolu hlu futhi bangahle bakwenze kwenzeke.
34. Phonsa iBash 'Yizintandokazi'
Kungumcimbi wakho futhi uzodla i-cacio e pepe futhi ubuke IGolden Girls uma ufuna. Yenza uhlu lwezinto zakho ozithandayo ongazidla, ubone, udlale noma wenze futhi uzihlanganise ndawonye kumcimbi omuhle kakhulu.
35. Hambani Glamping
Kuyindlela engcono kakhulu yokujabulela Umama Wemvelo. Izindawo zokucwaninga eziseduze nawe ezinikezela ngamakamelo kanokusho (izindlu zangasese nezihlambi ziyadingeka) nezinsiza ezisezingeni eliphezulu.
36. Go Gallery Hopping
Thola indawo yobuciko bendawo neqembu labangane bese ubona ukuthi ungasithola yini isiqeshana esizolethwa ekhaya ukukhumbula umcimbi.
UJulie Toy / Getty Izithombe
37. Thatha iTour Museum
Awuyeki ukufunda ngoba nje usukhulile (kodwa ubukwazi lokho vele). Shayela phambili ukubona ukuthi ngabe banikeza izinkambo ezizimele bese ubamba abangani bakho ntambama yokufunda namasiko.
38. Zama Isandla Sakho e-Glassblowing
Yiba nobuqili futhi ufunde ukuthi ungazenzela kanjani ama-tumblers akho, ama-trinkets nokuningi ngesigaba sokukhanya.
39. Jabulela i-Staycation
Awudingi ukugibela ibhanoyi ukuze uye eholidini. Bhuka ihhotela lezinkanyezi ezinhlanu eliseduze, insizakalo yegumbi loku-oda futhi— ahh— Nethezeka.
40. Hamba Uyobona Umbukiso
Noma ngabe itiyetha, i-ballet noma i-opera, ubusuku obujabulela ubuciko obudlalwayo nakanjani buzoba ubusuku bokukhunjulwa.
41. Thola i-Tattoo
Indlela emnandi futhi mhlawumbe ebingalindelekile nhlobo yokugubha le ngqophamlando. (Cabanga nje ukubukeka kobuso bezingane zakho lapho uzikhombisa.)
zokupheka ezincane zokudla okulula
42. Sula Iwodi Yakho
Ukuhlela kuyinto kumnandi . Kanjalo nokuthenga ikhabethe elisha. Thola ugqozi lokuthola ukubukeka okusha lapha.
Yuji Ozeki / Getty Izithombe
43. Volontiya ngenhloso enhle
Esikhundleni sezipho, cela abantu obathandayo ukuthi banikele ngesikhathi sabo kunhloso ethanda inhliziyo yakho esikhundleni salokho. Kungaba ukuvolontiya endaweni yokukhosela izilwane, ukufundisa izingane noma ukusiza ekwakheni ikhaya. Kungokuhlangenwe nakho okuhle kokubopha wena-nabanye-ozoqiniseka ngakho ukukhumbula. (Futhi usengaphumela ku-brunch ngemuva.)
44. Iya kuma-Movie
Qasha indawo yaseshashalazini ukuze uyenze umcimbi omkhulu… noma cha. Ukubuka umthethosivivinywa ophindwe kabili uwedwa kuzwakala kuyindlela enhle yokusebenzisa ubusuku. Dlulisa upapa.
45. Hlela Ukulanda Izimbali Zezimbali
Ukuklanywa kwembali kuyindlela yobuciko, kodwa ngenhlanhla, ungayazi ngesandla esisizayo. Amakilasi okucwaninga aseduze kwakho futhi ulungele ukuguqula ikhaya lakho ngomsebenzi wakho wezandla omuhle.
46. ​​Yenze Iqembu Lemvunulo
Ukugqoka akuyona i-Halloween kuphela, uyazi. Khetha itimu (ifilimu yakho oyithandayo, umzuzwana ngesikhathi, noma yini) noma uvumele izivakashi zakho zigqoke ngendlela ezikhetha ngayo.
47. Phonsa iBash yegolide
Amashumi ayisihlanu abizwa ngokuthi unyaka wejubili legolide, ngakho-ke hamba ungene esihlokweni ngokuthola imihlobiso ecwebezelayo, ukhonze iwayini elikhazimulayo, unikele ngengubo yakho yegolide enhle kakhulu uphinde ushaye lawa ma-donuts e-champagne. (Futhi uma othile efuna ukukupha umgexo wegolide, ungubani-ke wena ongamvimba?)
48. Iya Bowling
Lo msebenzi wokubuyela emuva ungahle ube yintandokazi entsha nabangani nomndeni. Thuthukisa isici esimnandi ngokwenza amahembe we-bowling owenzelwe wena ukugubha usuku lokuzalwa.
49. Bamba iCocktail Party
Ukuphonsela abangane bakho abaseduze abangu-20 isidlo sakusihlwa kungumsebenzi omningi. Kepha i-cocktail soirée eyinkimbinkimbi, ngakolunye uhlangothi, ingaphonswa kalula ngosizo lwezinsuku ezithile ngaphambi kokuhlela nabangane noma amalungu omndeni.
50. Bheka Okuthile Kuhlu Lwamabhakede Akho
I-Skydiving? Vula imic-night? Ukubuka ukushona kwelanga eSanta Monica? Noma yini esohlwini lwakho lwamabhakede, vele uyithole.
OKUSHIWO: Izeluleko Ezilula Ezi-6 Zabesifazane Abaseminyakeni Yabo engama-50
Abalandeli Beqiniso-Ubugebengu Bazothanda Uchungechunge Olusha lweNetflix 'uSophie: A Murder in West Cork'
'Ukungavikeleki' Isizini 3, Isiqephu 1 Recap: I-Party Lyft
Isazi Khuluma: Amathoyizi Ahamba Phambili Afundisa Ingane Yakho Encane Nemvelo
Izipho ezi-17 ezinhle kakhulu zabaseNew York
Izindlela zokupheka ezilula ze-Naan Pizza Ongazenza Ekhaya Namuhla
Amabhuzu wezinja amahle kakhulu kuzo zonke izinhlobo zokuzijabulisa ezinemilenze emine
Ngubani Umyeni kaJessica Simpson, u-Eric Johnson? Lokho Esikwaziyo Mayelana Nomdlali Wangaphambili weNFL
UGordon Ramsay Manje Ubaba Wezingane ezi-5! Hlangana neNdodana Yakhe Entsha, u-Oscar
I-Holi Makeup Inspo Yosaziwayo Ukubukeka I-Glam Ngokombala
UKelly Ripa Ulahlekile Ku-'Bukhoma 'Namuhla-futhi Sicabanga ukuthi Siyazi ukuthi kungani
Ingabe Ukuphuza Amanzi Kuyasiza Umqubuko? Ingabe Kuyimfihlo Ngempela Ukusula Isikhumba Esikhanyayo?
Ku-Numerology? Nakhu ukuthi Ungayibala Kanjani Inombolo Yendlela Yokuphila Kwakho (nokuthi Kusho Ukuthini)
ama-elsa afriziwe no-anna okuncane
izinhlobo ezahlukene zezinwele zezinwele
izingcaphuno ezihlekisayo ngabathandi bokudla
kanjani ukuqeda ukuwa kwezinwele
izindlela zemvelo zokukhulisa izinwele
ukuzivocavoca ukunciphisa amafutha esiswini kwabesifazane
Lezi Izona Zisusa Amabala Ezingcono Kakhulu Zezingubo — Futhi Sithole Izithombe Zangaphambili / Ngemuva Kokukufakazela
Nakhu Okumele Upheke Njalo Ngobusuku Kuleli Sonto (Juni 14 - 20)
Imithetho Yesikhumba: Amathiphu Wokunakekelwa Kwesikhumba Oily Okufanele Uyilandele
I-Poor (Encane) Ned: Nakhu Owabona khona Lokho Okuyisicefe Sophawu lwe-Ned Umber Ngaphambi Kombukiso wokuqala we-'Game of Thrones '
Sacela Isazi Sezobudlelwano Ukuhlaziya Umshado KaJack NoRebecca Pearson — Nakhu Akushoyo